यदि तपाईंसँग यी प्रोटीनहरू घरैमा हल्लाउँछन् भने तिनीहरूलाई फ्याक्नुहोस्
प्रोटीन शेकहरू लामो समयदेखि जिम मुसा र बडीबिल्डर्सको मनपर्दो रहेछन्, तर उनीहरूले मूलधारको साथ लोकप्रियता लिएका छन् उनीहरूको क्षमताले गर्दा नै तपाईलाई लामो समयसम्म भरपर्दो महसुस गर्न। यदि तपाइँ मिसादार संस्करणहरू बेवास्ता गर्नुहुन्छ र हल्का मीठो विकल्पहरूको लागि जानुभयो भने, तिनीहरू तपाईंको आहारमा स्वस्थ थप हुन सक्छ, त्यो हो यदि तिनीहरूलाई याद गरेन भने। दुर्भाग्यवस, प्रोटीन शेकको लोकप्रिय ब्रान्ड उनीहरूको उत्पादनहरू धेरै सम्झन बाध्य छन् भ्रमका कारणले पकाउने विधिमा सोया प्रोटीन समावेश गरिएको थियो। सोया लेबलमा छैन, र सोया एलर्जीको साथ कसैको लागि यो ठूलो सम्झौता हो।
मा नयाँ रिमाइन्डर चेतावनी एफडीए, साइटोस्पोर्ट, इंक द्वारा जारी गरिएको, आफ्नो डबल चकलेट र भनिला बीन प्रोटीन शेकको all प्याकमा बेच्ने घोषणा गर्दछ। उत्पादनहरू स्वास्थ्य खाद्य भण्डार, सुपरमार्केट र सुविधा स्टोरहरूमा, साथै अनलाइनमा राष्ट्रव्यापी बेचेका छन्। उत्पादनले सोया एलर्जीविना कुनै व्यक्तिलाई असर गर्ने अपेक्षा गरिँदैन, तर सोया प्याकेजि onको अवयवको रूपमा सूचीबद्ध नभएको तथ्य सोया एक धेरै ठूलो मुद्दा हो किनकि सोया एक ज्ञात एलर्जीन हो जसले गम्भीर प्रतिक्रिया वा घातक हुन सक्छ।
दिनको शीर्ष सम्झौता	अमेजनसँग di 60 भन्दा कमको लागि वास्तविक हीरा स्टड इयररिंगहरू छन् - र समीक्षाहरू यस संसारबाट बाहिर छन्!	मूल्य:59,90 $
कम्पनीले "जनस्वास्थ्यको रक्षा गर्न" भनेको थियो, त्यो रिकल तेस्रो-पार्टी विक्रेतामा भ्रमको कारण उत्पन्न भयो। यो आपूर्तिकर्ता जसले हिलाहटका लागि सामग्रीहरू आपूर्ति गर्छन्, तिनीहरूलाई सोया प्रोटीनको साथ क्रस दूषित। हिलाउँदा मुख्य मटरको रूपमा मटर प्रोटीनको प्रयोग हुन्छ र सोया लेबलमा हुँदैन, सोया एलर्जी भएको व्यक्तिलाई उत्पादन सुरक्षित छ भन्ने विश्वास गर्न अग्रसर गर्दछ। सामान्यतया यो केस हो, तर चकलेट स्वादको लागि १२/31१/२०२० र १/१/२०१२ को उत्पादन मितिहरू र १२/12०/२०२० र स्वाद भेनिलाको लागि ०१/२//२०१२ को उत्पादनहरूसँग धेरै हिलाउँदा तिनीहरू दूषित हुन सक्छन्। सोया संग।
कम्पनी बाट एक बयान:
यस समयमा, कुनै अन्य विकास उत्पाद यस स्थितिमा समावेश छैन। सबै प्रभावित आउटलेटहरूलाई तुरून्त प्रभावहरू शेल्फबाट हटाउन सल्लाह दिइन्छ। कम्पनीले फूड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) सँग नजिकबाट काम गरिरहेको छ र समस्यालाई सुधार गरेको छ, तर यसका साथै यसले उपभोक्ताहरूको लागि प्रतिबद्धता र चिन्ता बाहिर यी चरणहरू उठाइरहेको छ।
कम्पनी भन्छ कि यो समस्या संग सम्बन्धित बिमारी को कुनै रिपोर्ट प्राप्त भएको छैन, तर यो विश्वास छैन कारण हिला सुरक्षित छ विश्वास छैन यदि तपाईं सोया एलर्जी छ भने। कम्पनीले अनुरोध गर्दछ कि जो कोहीले निर्दिष्ट मितिहरूमा यी उत्पादनहरू खरिद गरे उनीहरूलाई बेवास्ता गर्न वा तिनीहरूलाई पूर्ण फिर्ताको लागि खरीद गरिएको ठाउँमा फिर्ता पठाउन। यदि तपाईंसँग सोया एलर्जी छैन भने पनि, रिकल निर्देशहरूको पालना गर्न उत्तम छ, तेस्रो पार्टी भ्रमको रूपमा जसले हिलामा सामग्रीलाई प्रभाव पार्छ तपाई जस्तोसुकै गडबडी गर्न चाहानुहुन्छ।
कम्पनी सम्पर्क विवरणहरू पनि उपलब्ध छन् रिमाइन्डर पृष्ठमा.
अमेजनसँग di 60 भन्दा कमको लागि वास्तविक हीरा स्टड इयररिंगहरू छन् - र समीक्षाहरू यस संसारबाट बाहिर छन्!	मूल्य:59,90 $
माइक वेनरले विगत दशकको लागि प्रविधि र भिडियो खेलहरूमा रिपोर्ट गरेका छन्, भर्खरको समाचारहरू र भर्चुअल वास्तविकता, पहनयोग्य यन्त्रहरू, स्मार्टफोनहरू, र भविष्यका टेक्नोलोजीका प्रवृतिहरूलाई कभर गर्दै।
भर्खरै, माइक डेली डटका लागि प्राविधिक लेखक थिए र यूएसए टुडे, टाइम डॉट कॉम, र अनगिनत अन्य वेबसाइटहरू र प्रिन्टमा प्रदर्शित गरिएको छ। उनको प्रेम
कथा उनको जुवा लत पछि सही छ।
यो लेख पहिलो (अंग्रेजीमा) https://bgr.com/lLive/supplement-recall-protein-shakes-5923646/ मा देखा पर्‍यो
छबीजीआरपेय पदार्थCESतिनीहरूलाई फ्याकघरप्रोटिनvous
ताराहरूको कोठामा। एशले ग्राहम: गर्भावस्था पछि सेक्स गर्ने यो नयाँ तरिका